Vhura 3D Injini, Amazon yakavhurika sosi mutambo injini yekugadzira AAA mitambo | Kubva kuLinux
Darkcrizt | 09/07/2021 10:51 | Yakagadziridzwa ku 09/07/2021 17:08 | Noticias
Injini yemitambo yeAmazon inonzi Lumberyard yaigara ichiwanikwa zvekushandisa mahara, asi haana kumbove nerutsigiro rukuru nevagadziriuye pamberi peichi kushomeka kwekukwezva, Amazon yakasarudza kushandura iyo injini yemitambo kuita yakavhurika sosi chirongwa Uye zvakare, ivo vakachinjawo zita reinjini yemutambo uye ivo vanogadzira sangano rinoongorora chirongwa ichi.
Ese maAmazon aya achangobva kufumurwa kuburikidza nechiziviso chinounza O3DE (Vhura 3D Injini) chirongwa, icho chinopa yakavhurika sosi yemitambo injini yakakodzera kugadzira iyo AAA mitambo.
Iyo mota O3DE inogadziriswazve uye yakavandudzwa vhezheni yeLumberyard injini, zvichibva paCryEngine matekinoroji akapihwa mvumo kubva kuCrytek muna2015 uye nerutsigiro rwemapuratifomu akasiyana siyana seLinux, Windows 10, macOS, iOS uye Android. Iyo kodhi yakanyorwa muC ++ uye yakaburitswa pasi peApache 2.0 uye MIT marezinesi.
Kusiyana kweO3DE kubva kuAmazon Lumberyard kunosanganisira nyowani yeCmake yekuvaka system, modular architecture, open utilities, a new pre-built system, an extensible Qt-based user interface, mamwe masimba ekushanda nemasevhisi masevhisi, mashandiro ekuita, kugona nyowani kwenzvimbo, kugadziridzwa kweinjini nerutsigiro rwekuronga mwaranzi, wepasirese kuvhenekera, kutarisira uye kunonoka kupa.
Nezve Vhura 3D Injini
Iyo mota inosanganisira yakasanganiswa yemitambo yekuvandudza nharaunda, yakawanda-yakasungwa Atom processor photorealistic rendering system nerutsigiro rweVulkan, simbi uye DirectX 12, inowoneka 3D modhi mhariri, chimiro chemaficha (Emotion FX), pre-yakavaka budiriro system (pre-yakagadzirwa), chaiyo-nguva fizikisi simulation injini uye math maraibhurari. iyo inoshandisa SIMD mirairo. Iyo yekuona programming nharaunda (Script Canvas), pamwe neLua nePython mitauro, inogona kushandiswa kutsanangura kufunga kwemutambo.
Isu tinoteerera kune vanogadzira mutambo uye vekufananidza avo vanoda zvimwe sarudzo zvinogonesa kubatana, kugadzirisa, uye kutonga kwekugadzira mune avo maitiro ekugadzira. Kuvaka maturusi e3D kubva pakutanga kunogona kuve mutengo unorambidza, kutora makore kukudziridza, uye kunoda zviwanikwa zvakakosha kuti uchengetedze. Vagadziri ava vanopedzisira vasarudza kushandisa mari yakakosha kudzoreredza vhiri kana kushandisa mhinduro dzekambani dzinogona kuve dzakaomarara kugadzirisa.
Inotsigira NVIDIA PhysX, NVIDIA Cloth, NVIDIA Blast, uye AMD TressFX yekufananidza kwemuviri, Uye zvakare, zvakare ine yakavakirwa-mukati network sisitimu ine rutsigiro rwekumanikidza kwemigwagwa uye kunyorera, kuenzanisa kwematambudziko enetiweki, zvinoreva kudzokorora kwedata uye kuwiriranisa kuyerera. Inotsigira fosi yepasirese mesh yemidziyo yemitambo, otomatiki ekugadzira zviwanikwa muPython mutauro, uye kurodha zviwanikwa mune asynchronous mode.
Pose, anopfuura makumi matatu maamoja anopiwa, anopiwa semaraibhurari akapatsanurwa, yakakodzera kutsiva, kubatanidzwa muzvirongwa zvechitatu-bato uye kushandiswa kwakasiyana. Semuenzaniso, nekutenda modularity, vagadziri vanogona kutsiva magiraidhi ekupa, ruzha system, rutsigiro rwemitauro, network network, injini yefizikisi, uye chero chimwe chinhu.
Isu takavaka chine simba chikamu sisitimu sisitimu uye inozivikanwa visual script Canvas script script injini. Isu takawanawo mupepeti mupepeti Emotion FX, takagadzira modular Gems system, uye tikamisikidza kuwanda kweTwitch neAWS. Asi chinhu chimwe chisina kumboshanduka raive basa redu: kuita yepasirese-yemahara 3D ekupa maturusi kuwanikwa kune wese munhu. Iye zvino tinoenda nhanho imwe kumberi.
Iyo mota iri kutoshandiswa neAmazon, akasiyana mutambo uye makirabhu studio uye makambani emarobhoti. Pamitambo yakagadzirwa neinjini, Nyika Nyowani inogona kusimbiswa.
Chekupedzisira, zvinotaurwa zvakare kuti kuve nekumwe kukura kweinjini papuratifomu isina kwayakarerekera pasi pezvinyorwa zveLinux Foundation, iyo Open 3D Foundation yakagadzirwa, Uyo chinangwa chake ndechekupa yakakwira-yakavhurika 3D injini yekuvandudza mitambo yazvino uye yepamusoro-chaiyo simulators inokwanisa kushanda munguva chaiyo uye nekupa cinematic mhando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Vhura 3D Injini, Amazon yakavhurwa sosi mutambo injini yekugadzira maAAA mitambo